"Andriamanitra, Mpamonjy antsika, izay tia ny olona rehetra hovonjena ka ho tonga amin’ny fahalalana ny marina." 1 imoty 2:4
"Fa toy izao no nitiavan’Andrimanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanany Lahitokana mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay." Jaona 3:16
“Mirary soa aindrindra!” Re etsy sy eroa izanyy teny izany, amin’ny fahatongavan’ny taona vaovao : any amin’ny lalantsaran’ny orinasa, eny an-dalana, any an-tsena … Mbola tsy misy na inona na inona voasoratra eo amin’ny takelaka fotsin’ity taona vao manomboka ity. Zavatra maro no andrasantsika aminy.
“Mirary soa, ary indrindra mirary fahasalamana!” Ambonin’ny zavatra rehetra tokoa mantsy di any fahasalamana no mahakasika antsika akaiky indrindra. Manahy isika, mieritreritra olom-pantatra tratran’ny aretina tsy hay sitranina. Eny, ny fahasalamana indrindra indrindra, satria iankinan’ny aintsika izany!
Kanefa ve tsy misy zavatra lehibe kokoa ho an’ny fiainantsika? Andriamanitra dia mbola manome antsika taona iray, na angamba ampahany amin’ity taona ity, hanatonantsika Azy. Fantatrao ve fa Izy koa dia mirary soa ho anao, ho an’ny taona vaovao? Iriny hianatra ny hahafantatra Azy ny olona tsirairay. Nirahiny ho ety an-tany Jesosy Kristy Zanany hanao làlana anatonantsika Azy, hanorina fifandraisana tena marina amin’ny olona. Ny hoe afaka miantso Azy ho Ray. Koa dia faniriana famelan-keloka, fiadanana fifaliana ary fahfahana no tononin’Andriamanitra ho anao.izany firarian-tsoa izany koa no ataonay. Mirary izahay, ho anao, taona voamariky ny fihaonana amin’ilay Andriamanitra tia anao, mitady anao, ary te hamonjy anao.
Dia tena ho “taona tsara” ho anao tokoa ity taona ity.